Fomba taloha ny fampirafesana
Date: 23 mai 2017 - 13:18
*** inty ny tantara ***
nindramina avy lavitra
NY FOMBA FANAO AMIN'NY FAMPIRAFESANA TETO IMERINA
Nalalaka tanteraka ny fampirafesana taloha ka nahazo nampirafy daholo ny lehilahy Merina na tanora na antitra. Azon'ny lehilahy atao ihany koa ny maka ny zanany ho rafy mba hiterahany, tsy ny zanany naterany akory fa ny zanak'anadahy na zana-drahavavin'ny vadiny no alainy. Amin'ireo vadin-dRalehilahy, izay mahay mifanaraka dia miray trano, ary raha tsy mahay mifanaraka kosa izy ireo dia samy hanaovana trano ka ny lehilahy ihany no miantoka ny hanina ho hanina, ny trano itoerana, ny lamba hitafiana, sns ... Ny fampiakarana rafy dia natao malaza sahala amin’ny fampiakaram-bady ihany, ka iantsoana havana, ny namana sy ny fokonolona; ary misy famonoana omby sy fihinanambe.
Ny fomba fanao amin'ny fampiakarana rafy no atao hoe FIFAHITANA sy TAHA. Ny taha dia karazana fanomezana omena ny vadibe, ho takalon'ny fampirafesana atao aminy. Misy manome @#$%&, ao ny manome vola, omby, tanimbary arakarak'izay ifanarahan'izy mivady ao, ary tena misy adivarotra be mihitsy amin'io . Raha mbola tsy notahana ny vadibe dia tsy azon'ny lehilahy atao mihitsy ny mampirafy na dia te hampirafy mafy aza izy. Tsy maintsy tahana toy ny natao tamin’ny vadibe teo aloha daholo koa ny rafy rehetra na tonga hatramin’ny 10 aza, ary izay efa vita taha tany aloha dia vidim-pandriana sisa no omena azy isaky ny misy rafy vaovao.
Toy izao avy ny zavatra atao rehefa hampirafy ny lehilahy :
Tsy maintsy miera amin’ny vadiny izy aloha, na firy na firy rafiny dia tsy maintsy ierana, dia miteny ravehivavy manao hoe « «Ataovy tsara ny tahako », dia raikitra amin’izay ny adivarotra amin’izy roa amin’izay tian-katao. Rehefa vita adivarotra amin’ny taha dia milaza amin’ny havany ravehivavy « hirafy aho fa efa vita » hoy izy, - « Ohatrinona ?» hoy ny havana, dia lazainy eo – « Oviana no hifahita ? » hoy hatrany ny havana, ary dia lazain-dravehivavy ny andro « Izao ny andro hifahitako, dia mandehana daholo ianareo, dia malahelo aho raha vitsy no any » . Ralehilahy koa efa milaza ny havany amin’ny andro hifahitany ary milaza ny fokonolona. Rehefa tonga ny andro malaza dia mandeha daholo amin’izay ny fombafomba isan-karazany toy ny kabary ka ny vady taloha (vady tsindriana) dia milahatra eo Avara-patana na firy na firy ny isany; ny vaovao kosa mipetraka etsy Atsimo-patana, ary dia mikabary amin’izay ralehilahy « Izay mandravarava izao ahy izao dia, manefa izao laniko izao .... »
Tamin’izany raha vao vady tsy mety tsindriana (ampirafesina) dia isaorana avy hatrany, aterina any amin’ny ray aman-dreniny, izany no fanjakan-dehilahy fahiny =D
Re: Fomba taloha ny fampirafesana
Date: 23 mai 2017 - 17:25
Tsy aty imerina irery fa hatrany amin'ny faritany koa io fomba io. Ny niaviany kosa dia fomba avy any ivelany. Isika mantsy dia taranaka mpifindra monina aziatika, arabo ary afrikana no betsaka. Izy ireo dia mananana tradition mampirafy daholo ka izay no nolovaintsika.
Eny fa na dia ao anaty baiboly aza dia misy mpampirafy (abrahama,moizy,jakoba, sns) toy izany koa ireo papa taloha, fa ny fivavahana maoderna no nandràra ny fampirafersana.
Fa ny condition iraisana kosa dia hoe mila ny accord avy amin'ny vadibe. Izany hoe tsy droit akory ny fampirafesana fa resaka négociation. Araka io voalaza eo ambony io dia miafara amin'ny fisarahana rehefa tsy manaiky ny vadibe. Izany hoe divorce amin'ilay olona noeritreretina hoe notiavina !!!
Donc, inona no fanjakan-dehilahy amin'izany ? Fiction izany.
MITOVY AMIN'NY ZAVA-MISY AMIN'IZAO IHANY !
Date: 23 mai 2017 - 18:07
FANAMPINY : Taloha dia arrangés ny ankamaroan'ny mariazy. Izany hoe tsy dia misy fitiavana eo amin'ny mpivady fa resaka convention sy convenance sociale no betsaka. Izay no mahatonga ny vadibe taloha tsy dia sarotiny satria lehilahy tsy tiany matetika no ampanambadiana azy.
Izy koa ary indraindray mampirafy any ambadika (vakio ny tantaran'ireo vadina mpanjaka romana sy eoropeana malaza ireo (messaline, cleopatre, sipan'i william wallace, vadin'i phillipe le long, princesse diana, sns.)
Date: 23 mai 2017 - 19:57
Azo ho sokajina tsy dia tsara fitondra tena izany ry zareo taloha sady manao tsinotsinona ny vhv ,asa aloha izay mba fitsaranareo fa izaho dia rikoriko amin'izany .
Date: 24 mai 2017 - 06:18
Ka misy zavatra mampiheritreritra ihany ity resaka hoe " voalaza @'ny Baiboly ny fampirafesana " . Tsy io irery fa misy zavatra hafa ko .
Ny fanotanina izany dia hoe " tsy eken'ny maro intsony io ankehitriny " nefa nataon'reo olona tompoina teny ao @'ny Baiboly sns .. .
Inona no tokony andraisana izany na ny fanazavana izany .
Date: 24 mai 2017 - 06:45
Ny lehilahy mihitsy no polygame de nature, izay ny natiorany, ao anaty rà-ny
lany andro sy vizana eo ianareo mitady ny antony; izay no izy dia ekena, dia samy mitanty ny anjarany eny
Efa nekeny ny Mpahary izany. Ny Apostlo Paoly no nametra hoe vady 1 ihany, ary hafatra ho an'izay mitarika fiangonana anefa.I Paoly tsy A.
maninona ny lanitra no manga, maninona ny bozaka no maintso
Date: 24 mai 2017 - 11:37
Manga ny lanitra ry tsotrab- satria io no loko absorber-ny gaz mi-composer ny atmosphère. Maitso ny bozaka satria ny pigment maitso no tazomin'ny bozaka !! ha ah ah ! Misy valiny daholo kah ! ha ha ha ! izay tsy ahitana valiny dia ailika any am andriamanitra !
Raha amin'ny lafiny ara-tsiansa indray no dinihina dia voakilasy ao amin'ny tontolon'ny biby ny olombelona saingy hafa ny fivoatran'ny atidohany ka dia lasa olona misaina toy izao isika. Toetran'ny biby nefa ny mi-RS amin'izay hitany, na lahy io na vavy. Ny lahy dia manana vady maro (lion, éléphant, maki, sns). Tavela ao amin'ny gene-ntsika olombelona angamba io toetra io ka izay tsy mahafehy tena dia mitsaingoka à gauche sy à droite, aloha sy aoriana ! ha ah ha ! Tandremo nareo mpampirafy be ireo (na lahy na vavy) fa biby toetra an ! sao dia manaikitra ka mahatapaka zavatr'olona na voakaikitra.
Par: kay tsy tsotra
Date: 24 mai 2017 - 17:40
ny fanontaniana anie dia hoe maninona no tahaka izay e? iza namorona ny gaz , iza namorona ny atmosphere, iza namorona bozaka, ahoana no misy lanitra manga,
maninona isika no mitovy amin 'ny biby, maninona isika no biby misaina, maninona no manao rs
I Dora mahay beu , omeo valiny mahafa -po izahay
ssss mandany andro fa veloma
Date: 24 mai 2017 - 21:07
Dora tsy mahay kah ! Fa isika te hi-justifier ny acte ataon'ny tenantsika izay fantatsika manao azy ihany fa tsy mety.
Rehefa tiana atao ilay zavatra dia ataovy fa aza mitady supporteurs sy justifications etsy sy eroa sy manodikodin-dresaka.
Ilay valin-teny efa raiki-tapisaka ao an-tsaintsika no tiantsika hivoaka eto tsinona. ha ha ha !
Moramora ho an'ny rameva no miditra amin'ny lava-panjaitra.... ha ha ha !
Par: Eny re
Date: 25 mai 2017 - 09:27
Rehefa tsy mahafehy tena dia mibirioka foana, tsy mahantaty fakam-panahy satria malemy ny nofo e!
Rehefa mandeha araky ny fanahy ihany vao mahatohitra ny nofo.
Io nofo mety lo io no itovizantsika @ biby, ka na fomba taloha na ankehitriny no Itadiavana explication dia tsisy miova fa izay ihany.
Fa misaotra an'i ity-ary nizara tantara mahaliana teto na izany aza.
Ny ao anaty baiboly, ireny tangara ireny dia natao hangalantsika lesona foana, misy message ambadiky ireny tangara ireny ka mila mangataka discernement ahatakarantsika izay Tiana ambara
Date: 25 mai 2017 - 12:29
Eny re >>>>
" ireny tantara ireny dia natao hangalantsika lesona , misy message ambadiky ireny tangara ireny ka mila mangataka discernement ahatakarantsika izay Tiana ambara "
Raha ny fijerinao firy isanjaton'ny milaza fa mpino sy mpakany ampiangonana no afaka na manana saina andalina sy andinika izay tokony dinihina tokoa ao @'ny teny masina .
Raha ny fijeriko ny firesaky ny olona sy ny fisianany sy fiainany dia agamba 2% raha misy . Mila fahaizana sy fisokafan'ny saina mantsy ny zavatra lazainao vao vita .Amiko tsy natao ary tsy tezaina ampiasa ny sainy ny mpino fa natao fotsiny anaiky sy hino izay lazain'ny OLONA MILAZA FA MAHALALA NY TENY MASINA SY NY FIVAVAHANA .
Date: 26 mai 2017 - 07:17
Kopikole> eo no idiran'ny resaka finoana anie! Mahavita izay tsy vitantsika Ilay tena Izy.
Natao ho an'ny olona rehetra ny voasoratra anaty baiboly sy ny famonjena ny fanahy.
Jereo ireo mpianatra apostoly 12, tsy tena olona manam-pahaizana daholo akory izy ireo fa misy olon-tsotra, mpanjono sns.
Samy nomena fanomezam-pahasoavana daholo isika,fa izao ny torohevitra raha te ahazo izay hafatra Tiana ampitaina amintsika
Angataho foana aloha ny Fanahy masina tsy hisaraka aminao, hanazava ny sainao, hanoro lalana anao, aza adino koa fa tena misy dikany lehibe ny Paroles na ny tenin'i Tsitoha. Ataovy tahaka ny fitrandraka harena nafenina na trésor izany, ary tena trésor mihitsy no hitanao rehefa tena mitady ny marina.
Aza malaky manakiana ny hafa raha tsy efa notrandrahanao sy hitanao ary hamafisin'ny Fanahy masina ao anatinao fa tsy mety ny fampianarany .
Tsy vitan’ny hafanam-po izany na ny fahaizana ny Tenin’Andriamanitra. Ny fahamasinana no hoentina mihatrika izany.
Fa raha hiverenana ny resaka hoe fampirafesana sy ny asan'ny nofo rehetra, dia aleo miala, mandositra rehefa be loatra ny fakam-panahy fa ny nofo malemy foana e!
Tsy misy ny fakam-panahy raha tsy misy ny fanirina na ny filàna (na tsara, na ratsy) ao anatinao.
Mandosira ny situation mitady hitarika anao hijangajanga na hampirafy.
Date: 26 mai 2017 - 10:20
eny re> marina tsy misy lavina ny anao.excuse dhl reo blabla reo,lazaina fa tsy misy hidiran'Andriamanitra,tokony fohanana zany ilay didy hoe AZA MIJANGAJANGA.
Ary ny mahagaga dia ny lahy no tena malaza @le fampirafesana.Mba ataovy hoe ny vavy indray ary ny mitanisa io fomba io d ahoana?tsy tonga d tamy avy any dhl koa ny lhl hanakiana d hilaza fa fialana bala dhl zany fa tsy zava-marina?
Zw eh,tsy misy nateraka hampirafy avy any ankibondreniny izany eh.fa ny filAna sy ny fitiavantena no betsaka d tsongoloana dhl zao tantara e,vakoka e,fomba e...
tsotrab>ianao milaza fa efa neken'ny Nahary ny fampirafesana, d naninona izy no tsy mba nanao ny hataony koa?aminao,iza no nanome ny didy folo?tsy Nahary va? koa izy indray v no ande hanaiky hoe MAHAZO MIJANGAJANGA? koa maninona zany ra fohanana dhl ireo didy 10 ireo ra izany?satria ny baiboly milaza fa raha diso @iray @ireo d diso @izy rht?koa tsy nde hamono olona, hangalatra,hanompy sampy,hiteniratsy ny Fanahy Masina dhl raha izany?satria efa diso t@anakiray tsinona koa.
Diniho iany ilay zavatra tenenina sy zaraina fa sao miteniteny foana ka lasa fahotana hoan'ny tena ftsn.
Date: 26 mai 2017 - 17:52
Marne , aza maka antendriny fa saino koa izay voasoratra
Efa namaky Soratra MAsina tsara v?
Mba lazao aminay aza hoe maninona ry Abrahama, Yakoba, Davida, Solomona, Mosesy izay olona nampiasainy Ny Ray, , nirahiny naneho ny voninahiny, tamin 'ny fomba mahery, no nanana vady maro daholo e?
Nanome Didy 10 ny Ray, fa nomeny an' olombelona koa ny " libre arbitre". >Fidio hoy izy ny lalàko, " MBA HO SAMBATRA IANAREO"
Kanefa tsy nisy na iray aza lasa anjely tampoka teo ( i satana no anjely latsaka antany). RAva ny fanjakana, niparitaka.... ka tsy mbola hitantsika ihany ve izany hatrizao. jereo ity mahazo eran'izao tontolo izao..
Sambatra be ry Marne, fa raha izy no ANd. dia efa foana Antanimora amin 'izao fotoana izao, dia olona fotsifotsy mangatsakatsaka daholo ny eny amin 'ny arabe.
Mbola hoa avy daholo izany fa mbola tsy izao
Izy aza mbola mamindrà fo, malahelo fa tadidiny hoy ny Teniny fa " vovoka " ny olombelona, malemy.
Aoka tsy maka ny toeran 'And. fa izy dia Iray ihany ary Izy no mahalala ny tena ao ambadika, ny zava -miafina rehetra
Par: aiz koa
Date: 29 mai 2017 - 14:11
marne>zaho aloha dia manohana anao tanteraka e.ary tsapako @famalinao fa olona mpandalina Baiboly ianao.
diniho>hoy ianao hoe fa naninona ry Abrahama sy ry Jakob SNS..no nanambady btsk.olombelona tahaka atsika ireo,tsy Andriamanitra akory ireo fa mitovy @tsika ian.ary efa nisy ny didy 10 t@fotoana nisy azy ireo.namindra fo azy ireo Andriamanitra fa tsy nanafoana na nankatoa ny fijangajangana akory.raha foana na nankatoavina io didy io t@zan d mety ts toy izao tsn ny firafitry ny didy tsk @zao.mety efa 9 sisa no tratratsika fa tsy folo tsn.satria nisy efa nankatoavina na nofoanana raha ny hevitrao no fakafakaina.
Date: 29 mai 2017 - 17:35
vakio ny Baiboly dia aza be fanontaniana aty amin 'ny forum
hita fa fitiavana te iady hevitra fotsiny
Date: 30 mai 2017 - 11:22
valiny>nga moa tsy hiady hevitra no hatao eto?nga moa tsy izany koa no hilaina ny forum????